A propos de l'aéroport international de Madagascar - Ravinala Airports
Fampahafantarana ny Ravinala Airports
Taorian’ny tolo-bidy nataon’ny Fanjakana Malagasy, RAVINALA AIRPORTS, izay miaramiasa amin’ny Meridiam, ADP International, Bouygues Bâtiment International sy Colas, no voafidy mba hanatanteraka ny asa fampandehanana, ny fanamboarana, fanodinana sy famatsiana ara-bolan’ny sernam-piaramanidina iraisam-pirenena Antananarivo (Ivato) sy NosyBe (Fascène), mandritra ny 28 taona. Ny fahaiza-manao rehetra ilaina ho amin’ny fampandehanana ny tetikasa dia tafiditra ao daholo : fitantanana ny seranam-piaramanidina, fa,amboarana ny lalana sy ny trano ary ny fampindramam-bola amin’ny fotoana maharitra. Ny orinasa miaramiasa amin’ny RAVINALA AIRPORTS dia manana traikefa matanjaka iraisam-pirenena ary manome ny asa mitovy amin’izany any amin’ny seranam-piaramanidina rehetra maneran-tany.
Ny tanjon’ny RAVINALA AIRPORTS dia ny hampandrosoana ny fahafahana mampiasa ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena, manatsara ny zavatra efa nitsangana rehetra ary mampanaraka azy ireo araka fenitra mifehy ny fiarovana ny tontolo iainana, ny hanatsarana ny kalitaon’ny asa eo amin’ny seranam-piaramanidina, fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa (orinasa momba ny sidina, mpandeha, varotra, fret, Sidina amin’ny ankapobeny) mba hampitomboana ny fahahampon’izy ireo mandritra ny fotoana maharitra ary mandray anjara amian’ny fampandrosoana ara-toekarena eto Madagascar amin’ny alalan’ny paikady fampandrosoana ny fitaterana an’habakabaka.
Ankehitriny ny tetikasa dia mampiasa olona mihoatra ny 1000 na mivantana na ankolaka. Mba hahatratrarana ny tanjona, RAVINALA AIRPORTS dia manaiky ny hizara traikefa iraisam-pirenena amin’ireo mpiara-miasa aminy.
Ny famatsiam-bola ankapobeny dia mihoatra ny 200 lavitrisa €. Any amin’ny faran’ny fanatsarana, ny trano ao namin’ny seranam-piaramanidina sy ny fiantsonan’ny mpandeha dia ho lasa vaovao avokoa na tena hiova tanteraka.
Tsidiho ato amin’ity rohy ity ny politikan’ny rafi-pitantanana anatiny ato amin’ny Airports.
Andraikitra sy zava-kendrena
Fanarahana antsakany sy andavany ny lalàna rehetra sy fametrahana ireo fenitra iraisam-pirenena mifehy ny asantsika;
Fihainoana sy fanomezana fahafaham-po ireo mpanjifa mpandeha, kaompaniam-pitaterana anabakabaka ary mpiara-miombon’antoka;
Fandraisana anjara mavitrika amin’ny fampandrosoana ny toe-karena eto an-toerana sy eto amin’ny firenena iray manontolo;
Fampivelarana ny fahaiza-manao sy fanomezana fahafaham-po ny mpiara-miasa rehetra;
Fiarovana ny tontolo iainana sy ny fametrahana andraikitra ara-piarahamonin’ny orinasa.
Ny ho lasa iray amin’ireo mpitantana seranam-piaramanidina fitaratra eto amin’ny Ranomasimbe Indiana amin’ny taona 2025
Ny maha-izy anay
Ny traikefa amin’ny asa
Ny fahafaham-pon’ny mpanjifa